Ikhabhathi yaseLakeside, amagumbi okulala ama-3, iibhafu ezi-2, iindawo zokulala ezi-8 - I-Airbnb
Ikhabhathi yaseLakeside, amagumbi okulala ama-3, iibhafu ezi-2, iindawo zokulala ezi-8
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDoug
UDoug ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Indawo! Indawo! Indawo! Emanzini!
Imibono igcwele kwikhabhini kunye nomngangatho weli chibi lihle, lizolileyo lijikelezwe lihlathi lesizwe.
Amagumbi okulala ama-3. Iibhedi ezi-3 ze-queen size. Ibhedi e-1 yebhedi. Ibhedi yesofa eyi-1 inokulala abantu abayi-8. Uninzi lwamasiko achukumisayo kwi-cabin.
Ikhitshi eligcweleyo elinomatshini wokuhlamba izitya, iimbiza, iipani kunye nefriji enkulu.
Kukho iindawo zokulala.
Ulwandle olukhuseleke kakhulu kwaye lutyibilika ngobunono, amaphenyane, iikayak, iibhodi zokubhexa, izikhephe ezikroliweyo ozisebenzisayo.
Isikhephe, intlanzi, qubha, phumla emlilweni!
IKhabhinethi yoku-1 iyinxalenye ye-7-Mile Pinecrest resort nje iimayile ezili-11 empuma ye-Eagle River kwi-7-Mile Lake ezolileyo nezolileyo. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide iqhutywa lusapho olunye ngaphezulu kweminyaka engama-45 kwaye yaziwa njengendawo "yokukhulula".
Ikhabhinethi yoku-1 yenye yeekhabhathi ezilishumi elinanye ezisebenza kule ndawo ekuchithelwa kuyo iiholide kwaye kule minyaka ingamashumi eminyaka ilula ibeyeyokuqala kunye nenombolo yokuqala yokhetho lweendwendwe zethu ngenxa yendawo ekuyo njengeyona ndlu ikufutshane nechibi kunye neembono ezininzi ezintle ezinikezelayo.
Kunyaka ophelileyo ikhabhinethi yayigutyungelwe ngokupheleleyo kwaye yahlaziywa ukuze ithande imeko entsha ngokucofa okuninzi.
Idesika enkulu iyamema kwaye iyakucela wena kunye nosapho lwakho kunye nabahlobo ukuba ukonwabele ukutya, imidlalo kunye namaxesha okuphumla emphethweni wamanzi. Idokhi kunye nolwandle zikude nje ngamanyathelo. Idekhi yesibini, encinci yokosa ibekwe bucala ngokupheleleyo ngamaplanga kwaye ichibi liyasebeza ukonwabela ikomityi yekofu ezolileyo kusasa ngesandi kuphela seloon ekude.
Amagumbi okuhlambela amabini amakhulu enza kube lula kumaqela amakhulu ukonwabela ikhabhathi. Enye yazo inebhafu egcweleyo kwaye enye ineshawa enkulu.
Uninzi lwabathengi bethu baphinda ishishini kwaye babuyela unyaka nonyaka. Abaninzi bebesiza amashumi eminyaka. Oku kuthetha ngolwaneliseko abalunandiphayo neentsapho zabo xa ziseholideyini. Zimbalwa kakhulu iintsuku ezifumanekayo ngexesha leenyanga zasehlotyeni ezixakekileyo ekupheleni kukaJuni, ngoJulayi nasekuqaleni kuka-Agasti. Ukuba unomdla kwirenti kwiinyanga zasehlotyeni, siya kuzama ukukuhlalisa, kodwa sinikeze ilungelo lokuqala lokwala kwiindwendwe zethu ezininzi ezibuyayo. Nceda wenze isicelo esikhethekileyo semihla yokurenta ehlotyeni kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukusebenza nawe.
Kunqabile ngaphambili ukuba ikhabhathi iqeshwe ngaphandle kwezo nyanga zasehlotyeni. Kodwa ngokulungiswa, ikhabhinethi ngoku ilungele iindwendwe zasentwasahlobo kunye nekwindla ukuba zonwabele njengoko ngoku iyikhabhathi yokwenyani yesizini emine.
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ibonelela ngerempu yesikhephe, indawo yokupaka iinqwelo ezirhuqwayo kunye nendawo yokumisa abo bafuna ukuzisa isikhephe sabo. Kukwakho namaphenyane amaninzi, iikayak, iibhodi zokubhexa kunye nezikhephe zealuminiyam ezifumanekayo ukuze zisetyenziswe ziindwendwe zethu.
Ulwandle oluziimitha ezingama-30 ukusuka kwidesika lubonelela ngendlela ethambekileyo, ekhuselekileyo ukuba abantwana badlale ngokoqobo imini yonke njengoko abazukulwana bethu beya kungqina.
Ikwindla inika awona maxesha angcono ukuba seNorthwoods nakwi-7 Mile kwikhabhinethi 1. Ukuloba kwe-Fall for musky, walleye kunye ne-smallmouth yeyona nto ilungileyo. Amakhulu amawaka eehektare zehlathi leSizwe laseNicolet elijikeleze indawo ekuchithelwa kuyo iiholide, libonelela ngeendlela ezininzi zokuhamba intaba, ukukhwela ibhayisekile okanye ii-ATVs. Imibala yamahlathi asekwindla ebonakala kumanzi azolileyo ayinakuthelekiswa nanto. Iindawo zokuthengisa iwayini zasekhaya, iindawo zokutyela, iindawo zokutyela, kunye neminyhadala efana neCranberry Fest kunye neColorama zimema ukuba wonwabe. Kwaye kukho igrouse yeNorthwood yenyani okanye inkunzi elungele ukuvavanya isakhono somzingeli.
Le kuphela kwekhabhathi ene-Wifi yasimahla efumanekayo kanye kwikhabhathi esuka kwisitya sesatellite.
Ikhabhinethi yodwa enedekhi yayo. Idekhi ngokuqinisekileyo yeyona ndawo ilungileyo echibini.
Eyona ndawo ikufutshane nechibi. Ichibi lingaphantsi kweenyawo ezi-6 ukusuka phambi kwendlwana. Kukho iifestile ezinkulu ezingaphaya kwekhabhathi ukuze ubambe iimbono zechibi ezitshintsha imini yonke ukusuka ekuphumeni kwelanga ukuya ekutshoneni kwelanga.
Zonke izinto zokulala zikhona, Nceda uze nezakho iitawuli.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye lilungele iimfuno zakho zokupheka.
I-Weber grill (ipropane) ikwidekhi yokosa.
Izitulo zokhuni ze-Adirondack elunxwemeni nakwindawo engqonge i-campfire pit.
Indawo enkulu yomlilo wenkampu nje amanyathelo ukusuka elunxwemeni.
Ichibi elizolileyo kakhulu.
Irempu yesikhephe kunye netrailer yokupaka isikhephe kwindawo yokupaka.
Indawo yokuhlamba impahla esetyenziswa ngengqekembe ekhoyo.
Akukho TV ekhabhathini, kodwa zonke iitshaneli ziyafumaneka kwiscreen esikhulu sikamabonwakude kwigumbi lokuphumla eliqhelekileyo ukuze ubukele umdlalo owuthandayo okanye ubonise.
Ichibi elizolileyo kunye nehlathi leSizwe laseNicolet.
UMlambo iEagle umgama oziikhilomitha ezili-11.
Umbuki zindwendwe ngu- Doug
Umphathi wendawo kwindawo yokuphumla.
Ngamanye amaxesha ngexesha lokuwa, umphathi unokuhamba, ke ibhokisi yokutshixa iyafumaneka ukuze isetyenziswe.